UDI: Soomaali badan ayaa diidmo heli doonto, marka ay codsanayaan sharciga dhalashada wadanka - NorSom News
UDI: Soomaali badan ayaa diidmo heli doonto, marka ay codsanayaan sharciga dhalashada wadanka
Wargayska klassekampen ayaa maanta warbixin ka diyaariyay in dadka soomaalida ah ee helayay dhalashada wadanka ay hoos u dhaceen 60%. Sababtuna waxay sheegeen inay tahay UDI-da oo adkeysay baaritaanka iyo xaqiijinta dhalashada qofka soomaaliga ah, marka la siinayo dhalashada wadanka.
(Halkan ka akhri NorSom News oo arintan wax ka qortay 3 bilood kahor: Soomaalida qaadanaysay dhalashada Norwey oo 60% hoos u dhacday sanadkii 2015.)
UDI-da ayaa sheegtay in baaritaan adag lagu sameyn doono, xoogana la saari doono xaqiijinta macluumaadka ku saabsan aqoonsiga qofka soomaaliga ah, marka laga shaqaynayo codsigiisa dhalashada wadankan Norwey. Taasna ay sababi karto in dad badan oo soomaali ah ay diidmo heli donaan. Waxayna intaas ku dareen in macluumaadka uu qofku bixiyay marka uu helayay degenaanshaha dib loogu noqon karo baaritaankoodu, hadii uu shaki yimaado.
Maria Andersson oo katirsan UDI-da ayaa Klassekampen u sheegtay in baaritaanka iyo xaqiijinta aqoonsiga qofka soomaaliga ay adkeeyeen kadib markii ay arkeen in dad badan oo soomaali ah ay ka been sheegeen dhalashada aqoonsigooda. Sidoo kale waxay sheegtay inay jiraan dad tiro ah oo isku dhiibay inay Soomaaliya ka yimaadeen, balse asal ahaan kasoo jeedo wadamada dariska la ah Soomaaliya.
Andersson ayaa sheegtay in sababtaas darteed ay kor u qaadeen aqoonta ay UDI-da iyo boolisku u leeyihiin arintan, si loo cadeeyo in qofku uu bixiyay macluumaad sax ah oo ku saabsan aqoonsigiisa. Waxayna sheegtay in ay baaritaan ku sameyn doonaan meelo badan oo aysan horey UDI-du u baari jirin, hadii aan laga cadeyn karin aqoonsiga qofka. Arintaas ay keeni karto in dad badan oo soomaali ah loo diido sharciga dhalashada wadankan.
Xildhibaan Baashe Muuse oo klassekampen ay waraysatay ayaa sidoo kale sheegay in ay xiriir lasoo sameeyeen dad badan oo soomaali ah oo loo diiday sharciga dhalashada wadankan, iyaga oo wadanka degenaa mudo ka badan 10 sano. Baashe ayaa sidoo kale sheegay in dad badan oo uu ka warqabo ay UDI-du dib ugu yeertay waraysi iyo intervju cusub, iyaga oo laga codsanayo inay xaqiijiyaan documentiyo iyo cadeymo ay xili hore dhiibeen, ayna u malaynayeen in loo aqoonsaday cadeymahaas.
Klassekampen ayaa Baashe waydiisay su aal ah : in UDI-du ay sheegayso in dadka lagu dhaganyahay badankoodu ay asal ahaan yimaadeen Djabuti. ?
Baashe ayaa ku jawaabay in Norwey ay deganyihiin dad aad u yar oo jabuutiyaan ah, Jabuutina aysan ka jirin dhibta ka jirta Soomaaliya oo kale. laakiin ay jiraan dad badan oo soomaali ah oo soo maray wadamada Kenya iyo Djabuti, ayna halkaas kasoo gateen cadeymo iyo documentiyo ay kusoo baxaan, arintaas aysan cadeyn u noqon karin in dadkaas ay wadamadaas ay soo mareen aysan dhalasho ahaan kasoo jeedin.
Xigasho: Klassekampen, rbnett.no
Previous article225 kiilo oo khaad ah oo lagu qabtay Gardermoen
Next articleKongsberg: Maxkamadeynta nin soomaali ah oo dil u geystay nin kale oo soomaali ah oo bilaabanayso